Ogaden News Agency (ONA) – Amnesty International oo Warqad Furan udirtay Baarlamaanka Itoobiya.
Amnesty International oo Warqad Furan udirtay Baarlamaanka Itoobiya.
Xoghayaha guud ee hay’ada caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha Amnesty International ayaa fariin adag udirtay baarlamaan ku sheega xukuumada wayaanaha.
Amnesty International ayaa ugu baaqday in baarlamaanka Gumaysiga Itoobiya muhiimada koobad siiyo xuquuqda aadamaha oo ay ka fiirsadaan in ay dadka la cabudhiyay culays horleh sii saaran oo ah in la hirgaliyo xukunkii deg degga ahaa, sidoo kale hay’adu waxay sheegtay in ay si wayn uga walaacsan tahay xaalada Gumaysiga Itoobiya guud ahaan gaar ahaan Gobalada Oromada, Amxaarada iyo wadanka lagumaysto ee Ogadenia.
Hay’ada ayaa sheegtay in 2016 kii markii Xukuumada Wayaanuhu wadanka galisay 10 bilood oo xaalad deg deg ah in wadanka ka dhaceen xad gudubyo ka dhan ah xuquuqda bini’aadmi nimada sida dil, xidhay, kufsi iyo jidhdil baahsan.
Amnesty International ayaa ugu danbayntii carabka ku adkaysay in xukumada wayaanaha ay ilaaliso xuquuqda bani’aadamka, Gumaysiga Itoobiya ayaa wuxuu safka hore kaga jiraa wadamada ugu cadaalada yar dunida sidoo kale saxaafada cabudhiya dadkuna ayna sida xorta ah u dhiiban karin aragtidooda.